ब्युँझँदै आरईएम ?- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
ब्युँझँदै आरईएम ?
श्रावण २४, २०७६ हिमेशरत्न बज्राचार्य
पछिल्ला केही दिन सामाजिक सञ्चालमा आरईएमको ट्रेन्ड नै चल्यो  । आरईएम अर्थात् र्‍यापिड आई मोमेन्ट  ।
प्रायः अमेरिकाको यो जर्जियाली ब्यान्डले आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्ने गर्छ, ‘आर.ई.एम.’ । ब्यान्डबारे किन ट्रेन्ड चल्यो होला ? धेरैले ध्यानले दिन चाहेनन्, बरु मख्ख परे । ब्यान्डका धेरैभन्दा धेरै प्रशंसकले के माने भने सायद यो बान्ड फेरि ब्युँझँदै छ, त्यसैले नै यसको नाम ट्रेन्डमा देखा पर्‍यो । नत्र यसको कारण अरू के नै हुन सक्थ्यो र ?
सन् २०११ देखि यो ब्यान्ड सक्रिय नै छैन, भलै यसका केही समस्या कुनै न कुन रूपमा आफूलाई व्यस्त राख्न प्रयास गरिरहन्छन् । जस्तो, ब्यान्डका बास गितारिस्ट माइक माइल्सले हालै एउटा टुरको घोषणा गरेका छन्, जसको उद्देश्य आफू जन्मे हुर्केको राज्य जर्जियाको संगीतलाई सम्मान गर्ने रहेको छ । यस टुरमा उनलाई साथ दिनेछन्, रोलिङ स्टोन्सका किबोर्ड बादक चक लेभेल र भ्वाइलिनमा महारथ प्राप्त रोबर्ट म्याक डफले ।
जर्जियाबाट विश्व संगीतमा नाम कमाउने धेरै छन् । तिनको उत्तिकै लोकप्रिय गीत पनि छन् । टुरमा यिनै गीत प्रस्तुत हुनेछन् । भनिरहनु पर्दैन, यो टुरमा आरईएमका गीत पनि त बज्ने नै छन् । आरईएम ट्रेन्डमा आएको एउटा कारण यो पनि रहेछ । तर जति बेला ब्यान्डका प्रशंसकले यसको कारण बुझे, सबै निराश नै भए । उनीहरू सबैको इच्छा हो, ब्यान्ड फेरि पहिले जस्तै सक्रिय होस्, त्यो पनि ब्यान्डका चारै संस्थापक सदस्यसहित ।
सन् १९८० मा स्थापना भएको अमेरिकी रक ब्यान्ड हो, यो । ड्रमर बिल बेरी, गितारिस्ट पिटर बक र गायक माइकल स्टाइपसँगै बास गितारिस्ट माइल्सले जति बेला सँगै काम गर्ने निर्णय गरे, त्यससँग जन्म भएको एउटा महान अल्टरनेटिभ रक ब्यान्डको । आरईएमलाई लगभग लगभग पहिलो अल्टरनेटिभ रन ब्यान्ड मानिन्छ । अथवा निर्भानासँग आरईएम नै यस्तो एकाध ब्यान्ड हो, जसले अल्टरनेटिभ रक संगीतलाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्‍यो ।
आरईएम वास्तवमै निकै लोकप्रिय पनि सावित भयो । यसका दुई स्पष्ट कारण थिए, पहिलो बकको आक्रामक गितार बजाउने शैली, अनि स्टाइपको निकै फरक तर मन तान्ने स्वर । आरईएमको गीत सुन्नुपर्छ, यो अरूको तुलनामा ठ्याक्कै फरक सुनिन्छ । अनि यसको एउटा ठोस कारण गीतका फरकखाले शब्द र अर्थ पनि हुन् । सन् १९८१ मा ब्यान्डले आफ्नो पहिलो गीत रिलिज गरेको थियो, ‘रेडियो फ्रि युरोप’ । यो गीत के चल्यो, बाँकी इतिहास नै भयो ।
सुरुतिर अन्डरग्राउन्ड सफलतामै रमेको आरईएमले सन् १९९० पछि व्यावसायिक सफलता पनि चुम्न थाल्यो र यसै समयमा त हो, दुई निकै सफल एल्बम निस्केको । पहिलो थियो, ‘आउट अफ टाइम’, अर्को ‘अटोमेटिक फर द पिपुल’ । त्यति बेला ‘लुजिङ माई रिलिजन’ नै खुबै लोकप्रियता पनि कमायो । यसलाई अल्टरनेटिभ रक संगीतको कोसेढुंगा गीत मानिन्छ । अल्टरनेटिभ रक म्युजिक के हो त ? यसका लागि यो गीत सुन्नै पर्छ ।
सन् १९९६ आइपुग्दा ब्यान्डका खराब दिन सुरु भए । बेरीले ब्यान्ड छाडे । बाँकी तीन सदस्यले केही समय ब्यान्ड त अगाडि बढाए, तर त्यो पहिलो जस्तो रहेन । सन् २०११ सम्म आइपुग्दा त ब्यान्डले आधिकारिक रूपमै भन्यो, अब हामी सँगै रहेनौं, आरईएम टुक्रियो । ब्यान्डका सदस्यबीच मन नै मिलेन भने किन सँगै बस्ने, उनीहरूको तर्क थियो । यसले एउटा गज्जब ब्यान्डको अवसान गरायो । तर ब्यान्डका विचार प्रशंसक अझै आस गर्दैछन्, आरईएम ब्युझिन्छ कि भनेर ? मीठा गीतको लोभ यस्तै हुन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ११:५७
नयाँ सिजन, नयाँ रणनीति
प्रि–सिजन टूर र ट्रान्सफर हेर्दा यसपल्ट पनि प्रिमियर लिगको मुख्य दावेदारका रूपमा सिटी र लिभरपुल नै रहनेछन् ।
श्रावण २४, २०७६ कुशल तिमल्सिना
गत सिजन च्याम्पियन्स लिगको फाइनल गटोटनह्यामलाई पराजित गरी उपाधि जितेपछि लिभरपुलका प्रशिक्षक जर्गेन क्लोपलाई फोन सम्पर्क गरेर म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले बधाई दिए  । जवाफमा क्लोपले अर्को सिजन योभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरी सिटीलाई टक्कर दिने उद्घोष गरेका थिए  ।
इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदै छ । प्रि–सिजन टुर र ट्रान्सफर हेर्दा यसपल्ट पनि प्रिमियर लिगको मुख्य दावेदारका रूपमा सिटी र लिभरपुल नै रहनेछन् । २ सिजन नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धमा परेको चेल्सी, टोटनह्याम, म्यानचेस्टर युनाइटेड र आर्सनलले उनीहरूलाई पछ्याउने छन् । गत सिजनमा पनि भएको यही हो ।
यसै साता सम्पन्न कम्युनिटी सिल्डमा सिटी र लिभरपुलबीचको टक्कर हेर्दा नयाँ सिजन थप रोमाञ्चक बन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिनेछ । त्यस खेलमा सिटी पेनाल्टी सुट आउटमा ५–४ गोलले विजयी रह्यो । नियमित समयमा दुवैले १–१ गोलको बराबरी खेलेका थिए । लिभरपुलले प्रिमियर लिगको उपाधिका लागि २३ वर्ष प्रतीक्षा गरेको छ । गत सिजन सिटीसँग १ अंकले पछि रहेपछि उपाधिबाट टाढिनुपरेको हो । प्रिमियर लिगको इतिहासमा ९० अंकभन्दा बढी हासिल गरे पनि उपाधिबाट वञ्चित हुनुपरेको पहिलो सिजन थियो त्यो । लिभरपुलले ९७ अंक र सिटीले त्योभन्दा १ अंक बढी बटुलेका थिए । गत सिजन चेल्सी दोस्रो स्थानको लिभरपुलसँग २५ अंकले पछि थियो । नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा क्लबका पूर्वमहान् खेलाडी फ्र्यांक लाम्पार्डको आगमनले नयाँ उत्साह आएको छ । तर उनलाई खेलाडीका रूपमा हासिल गरेको सफल प्रशिक्षकका रूपमा पनि दिलाउने ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।
लिगको शीर्ष स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावित अर्को टिम च्याम्पियन्स लिग फाइनलिस्ट टोटनह्याम पनि हो । उसले शीर्ष २ टोलीलाई अधिक दबाब दिने प्रयास गर्नेछ । आर्सनल पनि च्याम्पियन्स लिगमा स्थान बनाउन प्रयासरत हुनेछ । पछिल्लो ३ सिजन आर्सनलले च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन असफल भएको थियो । गत सिजनको मध्यतिर क्लब सम्हालेका पूर्वलेजेन्ड ओले गनर सोल्सायरबा म्यानचेस्टर युनाइटेडले विरासत फिर्ता ल्याउने आशा गरेको छ । रक्षा पंक्ति सुधारका लागि उनले लिसेस्टर सिटीबाट ह्यारी मगायरलाई ९७ मिलियन अमेरिकी डलरको कीर्तिमानी मूल्यमा अनुबन्ध गरेका छन् । आइतबार चेल्सीविरुद्धको पहिलो खेलका क्रममा उनले केही नयाँ खेलाडीलाई सुरुआती अवसर दिने सम्भावना छ । उनी अझै केही खेलाडीलाई आँखा लगाइरहेका छन्, जसको आगमन युनाइटेडका लागि उत्कृष्ट ११ छनोट गर्ने विकल्प बन्न सकोस् ।
यस सिजनका नयाँ क्लबहरू एस्टोन भिल्ला, नोरिच सिटी र सेफिल्ड युनाइटेड हुन् । तीनै क्लबले प्रिमियर लिगमा पुनरागमन गरेका हुन् । उनीहरूले आफूलाई शीर्ष डिभिजनमा कायम राख्ने प्रयास गर्नेछन् । गत सिजन प्रिमियर लिगमा बढुवा हुँदै सातौं स्थानमा रहेर लिग अन्त्य गरेको वुल्भ्सको सफलताबाट उनीहरू प्रेरित छन् । इंग्लिस प्रिमियर संसारमा सबैभन्दा धेरै समर्थक भएको लिग हो । म्यानचेस्टर युनाइटेडको युग समाप्त भएपछिको समयमा सिटी, चेल्सी र लिभरपुलले नै यसको उपाधिमा दावेदारिता दिइरहेका छन् । इंग्लिस फुटबलले आफ्नो ख्याति कायमै राख्नुमा दुई प्रशिक्षकको भूमिका पनि उत्तिकै देखिन्छ, जर्मन क्लोप र स्पेनिस ग्वार्डिओला ।
बोरुसिया डर्टमन्ड सानदार टिम फर्मेसन गरी लिभरपुल आएका क्लोपले च्याम्पियन्स लिगको उपाधिसँगै प्रिमियर लिगमा लिभरपुललाई अर्कै स्तरमा लगेका छन् । लिभरपुललाई हरेक प्रतियोगितामा उपाधिको मुख्य दावेदारमात्र होइन, हरेक खेलाडीमा जितको आत्मविश्वास भरेका छन् । लिभरपुलको आक्रामक रणनीतिलाई पनि उनले परिमार्जन गरेका छन् । उता ग्वार्डिओला पछिल्लो एक दशकयता बार्सिलोनाको सफलताको आर्किटेक्टका रूपमा चिनिन्छन् । चार वर्षमा बार्सिलोनालाई पाउनेजति सबै सफलता दिलाएर जर्मन च्याम्पियन बार्यन पुगेका उनले बार्यनलाई घरेलु लिगमा लगातार च्याम्पियन बनाए । युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको भोक पूरा गर्नका लागि इंग्लिस क्लब रोजेका ग्वार्डिओलाको नेतृत्वमा सिटीको टिम यस्तो बनेको छ कि त्यस्तो सन् २००८/०१२ को बार्सिलोना पनि थिएन ।
सन् २०१६ यता सिटीका लागि प्रशिक्षण गरिरहेका उनले २ सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाए । च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउने उनको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । अघिल्लो सिजन खेलाडी अनुबन्धका लागि ठूलो रकम खर्चेको सिटीले यसपल्ट तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्व दिएको छ ।११ वर्षको सहयात्रालाई बिट मार्दै सिटीका ‘खम्बा’ का रूपमा रहेका सेन्टर ब्याक भिन्सेन्ट कोम्प्यानी आफ्नो बाल्यकालको क्लब एन्डरलेक्ट फर्किएका छन् । त्यहाँ उनले प्रशिक्षक र खेलाडीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । ग्वार्डिओलाको मुख्य चुनौती नै कोम्प्यानीको प्रतिस्थापन हो । एट्याकिङ मिडफिल्डर केभिन डी ब्रुयन चोटमुक्त हुनु भने उनका लागि खुसीको पक्ष हो ।प्रिमियर लिगसँगै फ्रेन्च लिग वान पनि शुक्रबारदेखि नै सुरु हुनेछ । फ्रान्सेली स्ट्राइकर कालियन एम्बाप्पे र ब्राजिलियन सुपरस्टार नेइमार प्रेरित पेरिस सेन्ट जर्मेइन (पीएसजी), लिग वानको साविक विजेता हो । पछिल्लो ७ मध्ये ६ सिजनको च्याम्पियन पीएसजी यसपल्ट च्याम्पियन्स लिगको लक्ष्यमा छ । घरेलु फुटबलमा महारथीका रूपमा रहेको पीएसजी अहिलेसम्म युरोपेली च्याम्पियन बन्न सकेको छैन । मोनाको र लिलीले उसलाई उपाधिमा चुनौती दिन सक्नेछन् ।
इटालीको सिरी ए र स्पेनको ला लिगा भने अगस्ट १७ देखि मात्र सुरु हुनेछ । स्पेनिस फुटबलमा मुख्य तीन टोलीहरू बार्सिलोना, रियल मड्रिड र एट्लेटिको मड्रिडबीच नै उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । लगातार दुई सिजनको च्याम्पियन बार्सिलोनालाई एट्लेटिकोका फ्रान्सेली स्ट्राइकल एन्टोइन ग्रिजमनको आगमन च्याम्पियन्स लिग लक्ष्यमा सहयोगी बन्न सक्छ ।क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बहिर्गमनपछि सुपरस्टारको अभाव खड्किएको रियल मड्रिडमा प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानेले यस सिजन बेल्जियन प्लेमेकर इडेन हाजार्डलाई अनुबन्ध गरेर केही कम गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, यो पर्याप्त हुने छैन । समर ट्रान्सफरको अन्तिमसम्ममा उसले ठूला स्टारको अनुबन्ध गर्न सक्छ । प्रि–सिजन टुरमा चिर प्रतिद्वन्द्वी एट्लेटिकोसँग ७–३ गोलले पराजित भएपछि रियल झस्किएको छ । त्यो नतिजा नयाँ सिजनमा नयाँ रणनीति बनाउन सहयोगी हुने भन्दै प्रशिक्षक जिदाने सकारात्मक देखिएका छन् ।
युभेन्ट्सको एकछत्र वर्चस्व इटालियन फुटबलमा यथावत् नै छ । पछिल्लो सिजन पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आगमनले उसको स्तर अझै माथि जाने अपेक्षा थियो । खासगरी युभेन्ट्सले च्याम्पियन्स लिगमा ध्यान दिएको थियो । युरोपेली प्रतियोगितामा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसके पनि सिरी ए मा उसलाई चुनौती दिने कोही भएनन् ।
१० प्रिमियर लिग उपाधि
२०१०/११ म्यानचेस्टर युनाइटेड
२०११/१२ म्यानचेस्टर सिटी
२०१२/१३ म्यानचेस्टर युनाइटेड
२०१३/१४ म्यानचेस्टर सिटी
२०१५/१६ लिसेस्टर सिटी
२०१७/१८ म्यानचेस्टर सिटी
२०१८/१९ म्यानचेस्टर सिटी
नयाँ सिजनको पहिलो खेल
लिभरपुलविरुद्ध नोरिच सिटी
वेटह्यामविरुद्ध म्यानचेस्टर सिटी
बर्नमाउथविरुद्ध सेफिल्ड युनाइटेड
क्रिस्टल प्यालेसविरुद्ध एभर्टन
वाटफोर्डविरुद्ध ब्राइटन एन्ड होव अल्बियन
टोटनह्यामविरुद्ध एस्टोन भिल्ला
लिसेस्टर सिटीविरुद्ध उल्भरह्याम्प्टन
न्युकाशल युनाइटेडविरुद्ध आर्सनल
म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध चेल्सी
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ १२:०२
थप केही हेलो शुक्रबारबाट
अहिंसाको बाटोमा सत्याकृत
सेलेब्रिटीका अनुभव : दसैं घरमै रमाइलो
छेउछाउका खजानाको लोकतन्त्र
चन्द्रकिशोर आश्विन ३०, २०७६
एउटा कविताको शीर्षक छ, ‘बालकहरूको चित्रकला प्रतियोगिता ।’ त्यसमा बच्चाहरूले अनेकौं चित्र कोरेका छन् । नीलो आकाश, सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू बनाएका छन् । पहाड, नदी, झरना, मकान,...
चीनसम्बन्धका दोहोरो आयाम
मल्ल के. सुन्दर आश्विन ३०, २०७६
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सन् १९६० मार्च १८ का दिन चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए । त्यस दिन अध्यक्ष माओसंँग विशेषत: नेपाल–चीनबीच सगरमाथाको शिखरमाथिको सार्वभौमिकताबारे...
समृद्धिको ढोका खोल्ने जुक्ति
प्रा. विकासराज सत्याल आश्विन ३०, २०७६
संसारको दोस्रो शक्तिराष्ट्र जो शौभाग्यवश नेपालको छिमेकी हो, उसले आफ्नो सहृदयता देखाएको छ, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको दौरान । सडक र इन्टरनेटको सञ्जालले दुई देश...
पुरुष अझ बोल्नुपर्छ
बिन्दा पाण्डे आश्विन ३०, २०७६
२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र...
सम्पादकीय आश्विन ३०, २०७६
आप्रवासी नेपालीहरूले सन् २००३ मा स्थापना गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं महाधिवेशनले अन्यथा नभए आज नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनेछ । ८१ देशमा आफ्नो...
चिनियाँ छाताको ओत
सीके लाल आश्विन २९, २०७६
सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिन नेपाल आएका थिए । झन्डै २३ वर्षको अन्तराल, लगभग दुई वर्षको व्यग्र प्रतीक्षा एवं महिनौंको उत्सुक तयारीपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री...
१२ वर्षभरि लुकेको न्याय
सम्पादकीय आश्विन २९, २०७६
भनाइ नै छ, ‘कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि वेश ।’ एउटा ज्यादै डरलाग्दो र जघन्य अपराधको आरोप लागेको १२ वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद...